#Madagascar : Taksiborosy nivarina an-kady tany Behenjy : maty tsy tra-drano ny mpandeha roa | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Taksiborosy nivarina an-kady tany Behenjy : maty tsy tra-drano ny mpandeha roa
Jenjin’ny jiron’ny kamiao lehibe iray nifanena taminy ny mpamily ity taksiborosy Sprinter, avy any Ihosy. Tsy voafehiny intsony ny familiana ka nivarina tany anaty hantsana. Vokany, mpandeha roa, zazakely vao telo volana sy lehilahy iray 28 taona, no maty tsy tra-drano. Teny amin’ny lalam-pirenena faha-7, tany Andriambilany Behenjy, omaly vao maraina be no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina ity.
Misesisesy ny loza !
Tovolahy iray 28 taona sy zazakely iray telo volana eo ho eo no namoy ny ainy. Io no vokatry ny lozam-piarakodia nitranga tany Andriambilany Behenjy Pk 55 km+900 m amin’ny Rn 7, omaly maraina tamin’ny 5 ora sy 30 mn. Sivy naratra mafy vokatry ny dona nahazo azy ireo tao anaty fiara. Saika voa teo amin’ny lohany sy ny tanany avokoa ireo naratra ireo. Araka ny fampitam-baovao voaray nampitain’ny zandary, taksiborosy Sprinter ana koperativa iray avy any Ihosy ity nivadibadika tany anaty hantsana ity.
Sprinter telo samy avy any atsimo ary nifanarakaraka, ka ilay nitari-dalana no niharam-boina. Nifanena tamina kamiaobe « Citerne » tao anaty fiolahana ilay Sprinter. Voalazan’ny mpamily fa taratry ny hazavan’ny jiron’ilay kamiaobe no antony nahatonga ny loza. « Somary niankavanana aho satria jenjin’ny hazavan’ny jiron’ny fiara, kanjo nivarina tany anaty hantsana ny fiara », hoy ny fitantaran’ilay mpamily. Tampoka tamin’ireo mpandeha ity loza nitranga omaly ity satria samy renoky ny torimaso avokoa ny rehetra.
Potika tanteraka ny vatan’ilay fiara satria teo amin’ny hantsana 45 metatra eo ho eo ity nianjerany, raha ny fanazavana voaray hatrany. Nentina haingana tany amin’ny Csb II Ambatolampy kosa ireo naratra. Nisy ireo afaka nody avy hatrany taorian’ny fizahana nataon’ny mpitsabo. Tao kosa ireo voatery tsy maintsy nakarina hotsaboina aty an-drenivohitra. Taorian’ny fanadihadiana nataon’ny dokotera sy ny zandary kosa dia efa natolotra ny fianakaviany ny fatin’ireo olona namoy ny ainy tamin’ity lozam-piarakodia ity. Efa omaly alina kosa vao voasintona tao anaty hantsana ilay taksiborosy. Mitohy ny fanadihadiana momba ity loza ity.
Namoa-doza foana ny lalam-pirenena…
Tsy fitandremana ? Isan’ireo lalana ahitana lozam-piarakodia matetika ny eny amin’ny lalam-pirenena tato ho ato. Saika tao anaty fiolahana hatrany no isehoan’izany. Aiza ny fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana ? Ny mpamily sasany rahateo tsy manaja ny fiara mifanena aminy indraindray amin’ny alalan’ny fandefasana tara-pahazavana mety hahajenjina ny mason’ny mpamily hafa. Maizina rahateo ny andro, mamely ny torimaso ? Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra ny hametrahana ireny takelaby eny amin’ny lalam-pirenena ireny mba hisorohana ny loza toy ity nitranga teny Andriambilany ity. Tsiahivina fa vao ny alarobia teo no nisy mpitondra môtô iray maty potsitry ny taxi-be sy fiara 4×4 teny amin’ny Rn 2 teo Bekisoa Ambohimangakely. Samy manao izay tiany hatao ny mpamily sasany indraindray ? Aoka hitandrina fa tsy ananam-piry ny aina.